Tuesday March 28, 2017 - 12:10:39 in Wararka by Super Admin
Mandiqadda baxrul Mayit ee wadanka Urdun waxaa ka socda dhaq dhaqaaqyo siyaasadeed oo ay wadaan hoggaamiyaal katirsan ururka Jaamacatal Carab.
Dowladda dabadhilifka Urdun ayaa ku dhawaaqday in ay u diyaar garoowday marti gelinta shir madaxeedka hoggaamiyaasha Ururka Bahoobay Jaamacada Carabta shirkaas oo sanad walba ay isugu yimaadaan hoggaamiyaasha xukaamta dawaaqiidda carabta.
Kulan ay magaalada Cammaan ku yeesheen wasiirrada arrimaha dibadda Jaamacadda Carabta ayay ku sheegeen in ay ugogol xaareen shirka berri ay isugu imaan doonaan hoggaamiyaasha Ururka.
Wasiirka arrimaha dibadda Urdun ayaa sheegay in qodobada ugu muhiimsan ee shirka lagu faaqido doono ay kamid yihiin dagaallada ka socda Liibiya Yemen iyo sidoo kale qadiyadda filasdiin oo lafdhabar u ah.
Hoggaamiyaasha dabadhilifyada Carabta ayaa ku kulmaya qasri weyn oo kuyaal mandiqadda Baxrul Mayid waxayna taageeri doonaan mashruuca mareykanka iyo reegalbeedka ee ah in Yahuudda loo sharciyeeyo heysashada dhulalka muslimiinta Filasdiin.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in shirka Jaamacadda Carabta lagu taageeri doono hanaan wadahadal nabadeed ah oo dhaxmara maamulka calmaaniga ee Maxamuud Cabaas Abuu Maazin iyo Yahuudda si ugu dambeyn loo dhiso dowlad Yahuuddu leedahay oo haysata Qudus iyo dowlad camaalni ah oo filasdiin loo dhiso waana khiyaano hor leh oo ay ku kacayaan hoggamiyaasha dawaaqiidda carbeed.
Wufuud ka socota wadamada Ruushka, Mareykanka iyo ingiriiska ayaa shirka goob joog ka noqon doona kuwaas oo bogaadin doona qodobada kasoo bixi doona oo lafilayo in wax faa’iida ah aysan ulahaan muslimiinta.
Sidoo kale shir madaxeedka jaamacadda carabta ayaa lagu taageeri doono mashruuca ladagaalanka waxa loogu yeero Argagaxisada oo ah xamla saliibi ah oo America iyo xulufadeedu wataan.
Goobta shirku ka dhacayo waa Urdun oo qeyb ka ah mandiqadda bilaadu shaam haddii si kale loo eegana waxay ku dhowdahay Beytul Maqdis oo Yahuudda sahyuuniyadda ah heysato.
Hoggaamiyaasha shirka ka qeyb geli doono waxaa kamid ah Madaxweyne Suudaan Cumar Xasan Albashiir iyo Cabdi Fataax Alsiisi oo sanado ka hor inqilaab melleteri ku qabsaday talada wadanka Masar.
Shirkan wuxuu imaanayaa xilli ay sii xoogeysatay xamlada saliibiga ah ee cadawgu ku qaaday wadamo ay kamid yihiin Suuriya, Ciraaq, Liibiya iyo Yemen islamarkaana uu talada Mareykanka qabtay Donald Trump oo ah cunsuri islaam naceybka ku caanbaxay.